HALKAAN KA AKHRISO:- WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MANTA OO AH AXAD 14-KA JUUN 2020-KA
Sunday June 14, 2020 - 12:35:42 in Wararka by Mogadishu Times
MADAXWEYNAHA JABUUTI OO WAR KA SOO SA ARAY KULANKA FARMAAJO IYO MUUSE BIIXI Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shaaciyay in maalinta berri uu shir guddoomin doono shir u dhaxeeya Mad axweyne Farmaajo iyo Mad axweyne Muuse Biixi,k
MADAXWEYNAHA JABUUTI OO WAR KA SOO SA ARAY KULANKA FARMAAJO IYO MUUSE BIIXI Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shaaciyay in maalinta berri uu shir guddoomin doono shir u dhaxeeya Mad axweyne Farmaajo iyo Mad axweyne Muuse Biixi,kaasoo ka dhicidoona dalka Jabuuti. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku xaqiijiyay kulankaas oo qeyb ka ah wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland oo muddo hakad ku jiray. Mad axweyne Geelle ayaa sheegay inuu shirka ku casuumay R/W. Itoobiya Abiy Ahmed oo ka soo qeyb geli doona. Wafdi uu hoggaaminayo Md.Farmaajo oo uu ku jiro R/Wasaare Kheyre, G/Baarlamaan ka iyo W/Arrimaha Gudaha ayaa Maanta ka dhoofaya Muqdisho si ay uga qeyb galaan wada hadalka. Wada hadalada ka dhacaya dalka Jabuuti ayaa waxaa gadaal ka riixaya D/ Mareykan ka iyo M/Yurub, waxaana la qorsheeynayaa inuu xoojin u noqdo Mashruuca uu horbooda yo Abiy Ahmed ee ah is dhex galka dalalka Geeska Afrika. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa R/W.Itoobiya Abiy Ahmed xafiiskiisa ku kul ansiiyay Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi, kaasoo ahaa kulankiibu horreeyay ee fool ka fool u yeeshaan labada Mas'uul. Hase ahaatee waxaa suura geli waayay qorshe uu waday Abiy Ahmed oo ahaa in isa ga iyo Madaxweyne Farmaajo oo wada soc da inay ka dagaan M/Hargeysa. Si kastaba ha ahaatee dadka odorasa arri maha siyaasadda Geeska Afrika ayaa aami nsan in kulankan uu ku soo aaday xilli xasaa si ah oo dalalka Jabuuti, Itoobiya iyo Soom aaliya ay wajahayaan xaalada siyaasadeed oo gudaha ah. MAGACYADA 2 WAFDI OO KA KALA SOCDA DFS &SOOMAALILAND OO KU KULMAYA DALKA JABUUTI.
Warar ay heshay saxaafadda ayaa she egaya in Madaxda ka qaybgalaysa wadah adalka Somaliland iyo Soomaaliya, ay 7aad ka soo socda ay degi doonaan wadanka Djib outi. Wufuudda 2da dhinac oo ay kala hogaaminayaan mad axweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne Farm aajo, ay aa Toos u kulmi doona xilliga wada hadalka, waxaana goob joog ka noqonaya dawladda Maraykanka, Midawga Afrika, M/ Yurub, iyo xubno beesha Caalam ka ee kale ka socda. Madaxweyn aha Somaliland ay aa horraan tii Sanadkan baarlamanka ka sheegay in So maliland ay kula xaajoon kar to Soomaaliya Meel ay beesha Caalamku go ob joog ka ta hay,waxaana ay u muuqataa in taasi la tixg aliyay. Xubnaha la filayo inay Soomaaliya iyo Somaliland ku matalaan kulanka Jabuuti ayaa Magacyadooda kala yihiin sida tan:
1 Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi
2 G/Guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan
3W/Arrimaha Dibadda Yaasiin M. Faratoon
4W/Ganacsiga Maxamuud Xasan Saajin
5W/Xanaannada Xoolaha Siciid Sulub.
1Madaxweyne M/C/hi Farmaajo
2 R/Wasaare Xasan Cali Khayre
3G/G/ Shacabka Maxamed Mursal Sheekh
4W/Arrimaha Gudaha Cabdi M.Sabriye.
Ma jiraan weli xogtaasi ka dheer oo laga hel ay kulanka.
BEELLO 40 SANO DAGAAL KA DHEX OOGNAA OO SHALAY HESHIIS KALA SAXIIXDAY
2 kamid ah Beelaha G/Mudug oo maalmaha Shir Nabadeed uga socday Degaanka Bandi iradleey ee Gbolkaasi ayaa Shalay oo Sabt iya Warmurtiyeed ka soo saaray Shirkaasi.
Warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in Shirka lagu go’aamiyay in laga heshiiyo Col aaddii mudada dheer u dhexaysay 2da Bee lood islamarkaana Nabad waarta laga hirg eliyo Degaanka.
Shirka waxaa ka qaybgalay Waxgaradka iyo Isimada labada dhinac oo ay weheliyaan mas’uuliyiinta heer Federaal iyo heer Dowl ad Goboleed ku matala 2da Beelood ee Shi rka yeeshay. Qaar ka mid ah waxgaradka beelaha ayaa sheegay in Colaadaan ay taa gneyd Muddo 40 Sano.
Warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Wejiga 2aad ee Shirka Nabada ynta 20June 2020 lagu qaban doono D/ Gal dogob ee G/Mudug si loo sii dhammaystiro Arrimaha ka harsan Nabadaynta.
C.KARIIN XUSEEN GUULEED OO KA HADLAY WARMURTIYEED LAGA SOOSARAY SHIRKII BANDIIRADLEEY
Madaxweynihii hore maamulka Galmudug C.kariin Xuseen Guuleed ayaa bogaadiyay wadahadalka u billawday beelaha walaala ha ah ee dhawaanahaan shirarku uga socd een Bandiiradley.”Waxaan bo gaadinayaa soona dhaweyna yaa baaqa iyo go,aamada ka soo baxay Shirweynahii Na ba deynta iyo Dib u heshiisiinta ee ka socday M/Bandiiradley ee G/ Mudug.
Waxaan ku amaanayaa wax garadkii halk aas isugu tagay ee isugu jiray Siyaasiyiin, N abaddoonno, Culumudiin, Aqoonyahan, Dha linyaro iyo haween dhabar adeegga ay muuj iyeen iyo guulaha ay gaareen. Waxaa rajeyn ayaa in heshiiska iyo go,aamada dhaxalgal ka ka ah ee halkaas ka soo baxay ay waxg aradka 2da dhinac ka dhabeeyaan sidood ana u fuliyaan” ayuu yiri Md. Guuleed
RW KHEYRE OO KULAN LA QAATAY GUDDIGA WADAHADALLADA SOMALIYA IYO SOMALILAND
R/Wasaaraha JFS Md.Xasan Cali Khe yre ayaa kulan la qaatay Guddiga Qaran ee Dhabuheshiisiinta iyo Wadahadallada DF S& Soomaaliland. warar la helayo ayaa wa xaa ay sheegayaan in kulanka dhexmaray R/Wasaare Kheyre iyo Guddiga looga had lay sidii loo sii amba qaadi lahaa Wadahada llada DFS iyo Somaliland iyo Arrimo kale oo aan xog laga helin.
Kulanka oo ka dhacay Xarunta Madaxto oyadda Soomaaliya ayaa Md. Kheyre waxaa ku wehlinayay G/G/shacabka Maxamed Mur sal Sheekh Cabdiraxmaan.
Xafiisyada warbaahinta u qaabilsan 2da Mas’uul faah faahin rasmi ah laga bixi kulan kaas Mas’uuliyiinta ay la qaateen Guddiga Qaran ee Dhabuheshiisiinta iyo Wadahad allada Somalia iyo Somaliland.
Si kastaba Dalka Jabuuti ayaa waxaa lagu wadaa in Maanta uu shir uga furmo Mada xweynaha Soomaaliya Maxamed C/hi Far maajo iyo Madaxweynaha Somaliland Muu se Biixi Cabdi.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Madaxwe ynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in Maanta uu kulan sii doono 2da Madaxweyne, kulanka ayaa lagu Casuumay R/W/Itoob iya Abiy Axmed.
Xisbiyada mucaaradka dalka Ethiopia ay aa ka soo horjeestay go’aankii Golaha aqa lka sare ee 10kii Juun ugu kordhiyeen mu ddada xil haynta Xisbiga Talada hay, saba bo la xidhiidha walaaca Covid19. Qoraal ay sii daayeen OLF, OFC iyo ONLF waxay si wada jir ah u cambaareeyeen go'aan doora shada dib loogu dhigay waxayna ka digaya an in Itoobiya ay galayso marxalad keeni do onta qalalaase siyaasadeed oo qatar ah.
"Waxaan jeclaan lahayn inaan sheegno welwelkeenna ah in kacdoonno ballaaran oo rabshado isu beddeli kara ay kicin karaan, waxaa sidoo kale adkaan doonta in la xaka meeyo,”ayaa lagu yidhi qoraalka wadajirka ah.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeen ya (JWXO) waxay muujisay sida ay uga wal aacsan tahay go'aanka Golaha Shacbiga ee ah in dib loo dhigo doorashada 2020 iyo ko rdhinta waajibaadka dowladda iyo hay’ada heeda oo ka baxsan waxa dastuurka uu ogo lyahay. "Annaga oo ka walaacsan nabadgely ada dadweynaha, Si kastaba ha noqotee, waxaan aaminsanahay in muddokordhin ka sta oo loo sameeyo xukuumadaha xilligan ji ra inay ahayd in lagu maro hanaan loo wada dhan yahay iyo wadatashi taasoo dhalisa is afgarad siyaasadeed halkii laga gaari lahaa go'aan mideysan oo hal xisbi ay ku xukuntay baarlamaanka 2geesood ah,” ayaa lagu yiri qoraalka ONLF.
PUNTLAND OO KA HORTIMID SHIRKA BERRI U FURMAYO SOOMAALIYA IYO SOMALILAND
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa kasoo horjeesatay shir Maanta lagu wado inuu Dal ka Jabuuti uga furmo Soomaaliya iyo Maa mulka Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi. War qoraal ah oo uu soo saaray Afhayeenka Madaxweynaha Puntland Jaam ac Dabaraani ayaa waxaa uu ku sheegay in Puntland haddii aan laga qeybgelin wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya aysan waxba ka jirin oo laga leeyahay Ujeedo kale.
"Wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland ah oo aan Puntland door laga siin anigu ma garan karo ujeedka laga leeyahay, waayo ci dda ay xuduudu ka dhexeeyso waa Punt land iyo Somaliland” ayuu yiri Jaamac Daba raani.
Sidoo kale Afhayeenka ayaa waxaa uu til maamay in wax hagaagaan oo midnimo dhab ah laga shaqeynayo loo baahan yahay in wadahadalka 2da dhinac ay ka galaan Ma s’uuliyiin ka tirsan Puntland.
"Marka hadii la rabo inay wax hagaagaan oo midnimo dhab ah laga shaqeynayo waa in Masuuliyiinta Puntland, oo ay ku jiraan siy aasiyiinta Puntland ku metela Sanaag , Sool iyo Ceyn ay ka qeyb galaan wadahadalka, haddii kale waxaa uu wadahalku ku sif oobaya mid aan masiiri aheyn oo dano siyaa sadeed uun laga leeyahay” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Dabaraani.
Si kastaba hadalka Puntland ayaa waxaa ku soo aadayaa, iyadoo Maanta dalka Jabu uti uu shir uga furmayo Madaxweynaha Soo maaliya Maxamed C/hi Farmaajo iyo Madax weynaha Somaliland Muuse Biixi.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxweyna ha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa wax aa lagu xaqiijiyay in Maanta uu kulan sii doo no 2da Madaxweyne, waxaana kulanka lagu Casuumay R/W/ Itoobiya Abiy Axmed.
Maxkamada ugu sareysa dalka Burundi ayaa soo saartay go’aan looga gol leeyahay in lagu so afjaro marnaan dhanka awoodda ah oo ka dhalatay geeridii lama filaanka ah ayd ee Isnintii ku timid Md.Piere Nkurunziza.
Maxkamada dastuuriga ee dalkaasi ayaa sheegtay in Madaxwaynaha la doortay Evar iste Ndayishimiye xilka loogu dhaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Sharci ahaan, afhayeenlka baarlamaanka dalkaasi, Pascal Nyabenda, ayay ahayd in uu noqdo hogaamiyaha kumeelgaarka ee dalkaasi. Balse golaha wasiirada dalkaasi ay aa arrintan u gudbiyay maxkamadda islama rkana Mr Ndayishimiye ayaa imika noqon aya madaxwaynaha 2bilood ka hor xilligii ay ahayd inuu xilka la wareego. Waxaa xilka madaxwaynanimada loo doortay bishii May si uu u badalo Nkurunziza, oo xilka hayay muddo 15 sano ah. Garsoorayaasha maxak amada dastuuriga ee dalka Burundi ayaa waxay sheegeen in xilliga kumeelgaarka ee ay tahay inuu xilka qabto afhayeenka baarla maanka ay ahaan lahayd marka doorasho cusub la qabanayo, balse imika uu joogo madaxwayne cusub oo la doortay.
PUNTLAND OO XUKUN DIL AH KU FULISAY 3 NIN OO KA TIRSANAA ALSHABAAB
M/Boosaaso ayaa waxaa Shalay lagu too gtay 3 nin oo horey ay maxkamadi ugu ridd ay xukun ah iney ka tirsanaayeen ururka AlShabaab,kuwaasi oo muddo sanad ku dhow ku xirnaa xabsi ku yaalla magaaladaasi.
Ciidamada ammaanka ee Boosaaso ayaa raggan ka qabtay magaalada xilli ay ku gu da jireen howlgal ay ku raadinayaan malay shiyaadka AlShabaab.
3da qof ee Shalay dilka lagu fuliyey ayaa ka ah: Maxamed Xasan Barre, Bishaar Max amed Xasan&Cabdixakiin Maxamed Faarax.
Maxkamadda darajada 1aad ayaa ridday xukunka dilka ee raggan Shalay la toogtay iyadoo maxkamadda racfaankuna ay ku raa cday go’aankaasi.
VILLA SOMALIA OO WAR KA SOO SAARTAY WADA HADALADA DF IYO SOMALILAND
Madaxtooyada Qaranka ayaa Xalay war kooban ka soo saartay wadahadalada 7kan lagu wado inay dalka Jabuuti ku yeeshaan Madaxweynaha DFS, Maxamed C/hi Farma ajo iyo Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi. Gogoshada wadahadalada ayaa waxaa soo qabanqaabisay oo dhigtay D/Ja buuti, oo u muuqato inay gacan ka heleyso D/Mareykanka, si horey loogu sii amba qaa do wadahadaladii 2da dhinac.
In muddo ahba waxaa hakad uu ku jiray wadahadaladii DFiyo Somaliland, oo horey meelo kala duwan loogu qabtay, balse mudd ooyinkii dambe uu gaabis iska lahaa.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Somaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa qoraal u Shalay ku daabacay barta Twitterka waxaa uu ku sheegay in Mdaxweynaha Somaliya ay ka go’an tahay wax kasta uu su urtagelin kara wadahadalo mira dhala.
Qoraalka ayaa lagu sheegay inay tani la ja an qaadeyso dadaalada dib u heshiisiineed ee Madaxweynaha Somaliya, islamarkaana ay xaqiijineyso hadafkiisa ah in la hubiyo wal aaltinimada, taa oo ah baa qoraalka lagu yiri udub dhexaadka ummaddaan. Qoraalka ayaa u qornaa: "Madaxweyne Farmaajo waxaa ka go’an dhammaan dada alada horseedaya wadahadalada guusha leh ee lala gelayo Somaliland.”
"Tani waxay la jaan qaadaysaa qaabkiisa dib u heshiisiinta, waxayna xaqiijineysaa mo wqifkiisa si loo hubiyo walaaltinimada, taas oo ah udub dhexaa dka umadaan.”
TAHRIIBAYAAL SOOMAALI AY KU JIRTO OO LAGU LAAYAY DALKA LIIBIYA.
Rag magafayaal ah ayaa 7aadkii hore da lka Libya ku laayey dad muhaajiriin ah oo ga arayey illaa 30 qof, kadib markii muhaajirii nta ay dileen mid ka mid ah magafayaasha. Waxaa hadda soo baxaya warar sheegaya in dadkaasi ay Soomaali ku jireen,
Waxaana inta la xaqiijiyay dhintay mid, hal ka mid kalena uu ku dhaawacmay.
Maxamed Colaad Xasan ayaa Khadka tale efanka ee M/Tripoli caasimadda Libya kula xiriiray safiirka Soomaaliya ee Libya Muxiy adiin M. Kaalmoy.
XAALADAHA DHIMASHADA COVID19 EE DALKA OO KORODHAY
W/Caafimaadka Somaliya ayaa waxay Shalay ka xog warantay xaaladihii ugu dam beeyay xanuunsidaha COVID19 ee dalka, sideed iyo afantii saac ee la soo dhaafay.
Warbixinta maalinlaha ee COVID19 ayaa waxaa lagu sheegay in dalka laga diiwaange liyay 66 xaaladood oo cusub, kuwaa oo into da badan laga xaqiijiyay deegaanada Somal iland. Somaliland ayaa waxaa laga diiwaan geliyay 46 xaaladood oo cusub, Puntland 12 , Banaadir 5, K/Galbeed 2 iyo hal xaalad oo laga diiwaangeliyay Jubbaland, taa oo wad arta guud ee dalka laga diiwaangeliyay ka dhigeysa 2,579.
55 ka mida bukaanada cusub waxaa wee ye rag, halka 11ka kalana ay dumar yihiin, sida ku cad Jadwalka W/Caafimaadka Soma liya ee gelinkii dambe ee Shalay ka soo ba xay.
Jadwalka waxaa lagu muujiyay in 27 buk aan ay haataan ka bogsadeen xanuunka, waxayna taasi tirada guud ee xanuunka ka bogsatay ka dhigeysaa 559 qof.
Sidoo kale W/Caafimaadka waxaa ay dal ka ka diiwaangelisay 2 xaaladood oo dhima sho ah, tirada xanuunka dalka ugu geeriyoo tayna waxay gaareysaa 87 ruux.
1,933 bukaan ayaa iminka gudaha dalka u gula ildaran cudursidaha COVID19 ee Cor onavirus uu keeno, waa sida ay W/Caafima adka ku xustay jadwalkeedaan ugu dambe eyay.
Markaad fiiriso tirada xanuunka ka bogs aneyso waxaa in badan ka badan tirada ma alinlaha, ee loo diiwaangelinayo inuu xanuun ka soo ritay, waana arrin walaaceeda leh.
Fariimaha Waaxda Caafimaadka ee dalka ayaa ah in bulshada ay ku dhaqanto talooyin ka caafimadeed ee loo jeedinayo, taa oo suu rtagal ka dhigi karta mid xadida xanuunka da lka ku faafaya maalinba maalinta ka dam
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaale) iyo Wakiilka Q/Mid oobey ee Soomaaliya Amb. James Swan ay aa shalay xerada Xalane ku yeeshay kulan ay uga wada hadleen arrimo dhowr ah.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulanka intii uu socday diirada lagu saaray waxaa ka mid ah sidii loogu diyaar garobi lahaa sugida am niga xilliga doora shoo yinka iyo wada shaqe ynta labada dhinac.
Wasiir Islow oo qoraal kooban oo uu ku fa ah faahinayay kulanka soo dhigay bartiisa Facebook, ayaa sheegay in 2da dhinac ay ka arrinsadeen 3qodob. "Waxaan Shalay ku lan la yeeshay Wakiilka Xoghayaha Guud ee QM,James Swan oo aynu ka wada hadalnay xaaladda dalka, wada shaqeynta 2da dhinac iyo u diyaargarowga suggidda amniga xilliga doorashooyinka”ayuu yiri W/ducaale
Ma jiro wali wax war ah oo uu kulankan ka soo saaray Wakiilka QM.ee arrimaha Soo maaliya Amb. James Swan, iyadoo Caalam ka si dhaw ula socdo xaalada kala guurka ah ee wadanka uu galay, xili ay gabaabsi ta hay mudo xileedka madaxweyne Farmaajo
MADAXWEYNAHA JABUUTI IYO TALIYAHA AFRICOM OO KA WADA HADLAY HOWLGALA DA KA SOCDA SOOMAALIYA.
Madaxweynaha J/Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Taliyaha AFRICOM Jeneral Ste phen Townsend ayaa ka wada hadlay Ha wlgalka M/Afrika ee ka socda Soomaal iya&xanuunka COVI D19.Taliyaha Ciidan ka Maraykanka ka jooga qaarada Afrika ee AFRICOM, Jen. St ephen Townsend waxa uu booqasho ku teg ay dalka Jabuuti, isagoo la kulmay Madax weyne Geelle iyo Hoggaamiy ayaal kale oo ka tirsan Madaxda dalkaasi.
Waa Socdaalkii u horeeyey ee uu Taliya ha AFRICOM ugu soo ambabaxo, tan iyo markii uu Caalamka ka dillaacay xanuunka dilaaga ag ee Coronavirus. Jen.Stephen To wnsend waxa uu tilmaamay inay Jabuuti ta hay Isbahaysi muhiim u ah Maraykanka, isla markaana ay sii wadi doonaan Xoojinta Xiriir ka Joogtada ee labada dal.
Waxa uu intaasi ku daray inay Ciiddanka Jabuuti ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM muujiyeen Hoggaamintooda ku aadan Taa geeradda Ladagaalanka Alshabaab ee So maliya. Jabuuti waxaa Soomaaliya ka jooga 1,800 Askari, kuwaasi oo qeyb ka ah Haw lgalka AMISOM, waxaana fadhigooda yahay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
Taliyaha Ciiddanka Maraykanka ka jooga Afr ika ee AFRICOM, Jeneral Stephen Towns end waxa uu Dowladda Jabuuti kaga mahad celiyey taageerada hagar la’aanta ee ay siiyeen Hawlgalladda Loojistikada ee AFRICOM,xilligii lagu gudajira Kahort aga COVID 19, wuxuuna ku ammaanay sida ay Jabuuti guusha uga gaartay Xakamaynta COVID 19. Jen.Stephen Townsend waxa kal oo uu Saldhiga Maraykanka ee Camp Lemo nnier kula kulmay W/Arrimaha Dibedda iyo Gaashaandhiga ee dalka Jabuuti, Maxamu ud Cabdi Yuusuf iyo Xasan Cumar Maxamu ud Burhaan & Taliyaha Guud ee Milliteriga Jabuuti, Daahir Cali Maxamed.
AFRICOM ayaa mudooyinkii dambe ya reeyay weeraradii dhanka Cirka ahaa ee ay ka gaysanjireen guddaha Soomaaliya, ka dib markii Xoghaya guud ee QM uu ku dhaw aaqay guud ahaan xabad joojin sababo la xariira ka hortaga xanuunka Covid19.
MUCAARADKA SOMALILAND QAARKOOD OO DII DAY KA QEYB GALKA SHIRKA JABUUTI
Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa sheeg ay inuu hadda ka soo hor jeedo kulanka la filayo in uu dalka Jabuuti ku dhex maromadaxweynayaa sha Somaliland iyo Soomaaliya.
Geeska kale, guddoomiye ku xigeenka 1aad ee xisbiga Waddani Cabdirisaaq Khaliif ayaa sheegay in ay si buuxda u taageersan yihiin kulankaasi.
Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng Fays al Cali Waraabe, ayaa sheegay inaan la jog in wakhtigii lala hadli lahaa dawladda uu ma daxweyne Farmaajo, hoggaamiyo.
"Aniga jeermaan ahaan mawqifkaygu wa xa weeyi horena waan uga soo horjeeday ho rena waan u sheegay inaan kulankaasi aanu haatan meesha qaban, wakhtigeediina aanu ahayn” ayuu yiri Faysal Cali Waraabe.
"Dawladda Soomaaliya ee Shalay lala kul mayaana aanay ahayn dawlad mutaysatay in lala kulmo ayaan u arkaa, markaa guud ahaan kama soo horjeedno in Somaliland iyo Soomaaliya wada hadlaan hase ahaatee dawladda hadda joogta ood ogtahay dhibaat ooyinka ay la raadiyeen Somaliland iyo he shiisyadii ay ka baxeen, iyo kii u dambeeyey ee ninkaa arimaha dibada u qaabilsan wixii uu ku hadlayey in la horfadhiistaa waxaan u aragnaa inay tahay guul darro ku timi Soma liland.”ayuu yiri Mar kale Faysal Cali Wara abe.
Maxkamada G/Banaadir ayaa Shalay bilo wday dhageysiga dacwadaha loo heysto 10 ruux oo kamid ah shaqaalaha W/Caafimaad ka Xukuumada Soomaaliya.
Dadka Shalay maxkamada ka soo hormu uqday dad isugu jiro Agaasime waaxeedyo iyo Agaasimaha guud oo dhawaan uun xab siga laga sii daayay, ayaa loo heystaa luns ashada xoolo dadweyne, iyadoo maalmihii danbe diyaarinta galdacwadeedkooda uu socday.G/Maxkamada G/Banaadir Cabdi khadar Maxamed Xasan oo goob joog ka ahaa maxkamada ayaa sheegay iney ta hay fal foolxun in shaqaalaha dowladda lagu soo eedeeyo arrimo la xiriira musuq maas uq, halkii ay eheyd iney iyaga la dagaalaan mus uqa. Hay’adaha baarista ayuu faray iney si ad ag ula socdaan oo ay baaris dheeriya ku sa meeyaan shaqaalaha xafiisyada dowladd a, iyadoo cidii musuq lagu helana aan loo sa meyn doonin wax cafis ah, sida uu sheegay.
Waxyaabaha dadkan loo heysto waxaa kamid ah musuq maasuq ay ku sameeyeen qaar kamid ah taageeradii caalamka intii dal kan la siinayay kaalmooyinka ay uga hortag ayaan la dagaalanka xanuunka Covid19, wa xaana suuqyada caasimadda lagu kala gada nayay qaar kamid ah agabkii Caronavirus.
Md. Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor Ma daxweynaha DGGM iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaaray deegaanka Bandarqaali ee G/Mudug, iyadoo lagu soo dhaweeyay halka as. Safarka Md.Qoorqoor ee deegaankaas ayaa waxaa ku wehlinaya Xildhibaano ka tirsan BF, Wasiiro iyo Xildhibaano kamid ah Galmudig, waxaana halkaas kusoo dhaweey ay Maamuka G/Mudug iyo qeybaha kala du wan ee Bulshada.
Intaas kadib Qoorqoor ayaa kulan la qaat ay Odayaasha iyo Waxgaradka deegaanka Bandarqaali, isagoo kala hadlay xaaladda deegaanka iyo waxyaabaha maamulka Gal mudug ay uga baahan yihiin. Md.qoor qoor ayaa bulshada deegaanka Bandarqaali u ba lan qaaday in Maamulkiisa uu wax badan ka qaban doono, isla markaana dadka deegaa nada uu si dhow Maamulka Galmuduig ula shaqeen doono.
Md.Qoorqoor iyo wafdi la socda ayaa saa cada ha soo socda ku wajahan deegaano dhowr ah oo ku yaalla W/M/Gaalkacyo, wax aana kamid ah Qoryaweyn iyo Afbarwaaqo.
Safar dhinaca dhulka ah ayuu Qoorqoor uga soo baxay Caasimadda Galmudug ee Dhus amareeb, isagoo horey u soo maray deegaa no iyo Magaalooyin waaweyn oo ka tirsan Maamulkaas.
TIRADDA DADKA UU KU DHACAY CORONA VIRUS EE SOMALILAND OO SARE U KACDAY
Wasaaradda horumarinta Caafimaadka Somaliland ayaa shaacisay tirada dadka xanuunka Covid_19 laga helay 48kii Saacadood ee u dambeeyay
Wasaaraddu waxay sheegtay in dadkii baadhitaanka lagu sameeyay 48kii Saacadood ee u dambeeyay Xanuunka laga helay 43 ka mid ah.
Waxa kale oo ay Wasaaraddu sheegtay un hal qof u dhintay xanuunka 48kii Saacadood ee u dambeeyay, taasi oo tirada dadka uu xanuunku ku dilay Gudaha Somaliland ka dhigaysa 27 Qof.
43 Qof ee xanuunka laga helay ayaa tirada guud ee dadka uu gudaha Somaliland xanuunku ka haleelay ka dhigaysa 547 Ruux.
WASAARADA XANNAANADA XOOLAHA SOM ALI LAND OO SHEEGTAY IN LAGA BEEN SHEEG AY DHIMASHADA GEELA G/SOOL
Masuuliyiin ka socda W/Xannaanada Xoo laha Somaliland oo mudooyinkii la soo dhaaf ay baadhitaan ku wadey xoolaha G/Sool ay aa waxay sheegeen in si qaldan warbaahinta qaark ood baahiyeen xanuun 30 00 oo neef ku diley G. So ol, waxayse qireen in ay jiraan xanuun xoola ha haya oo ay daweeyeen intii ay safarka ku jireen.
Isuduwaha Xanaanada Xoolaha G/Sool C/rashiid Axmed Bootaan ayaa ka warbixiy ey sababta kaliftey safarkan ay ku marayaan degaanada xoola raacatadu u badan yihiin oo ku sheegay in ay tahay xaqiiqo raadin xa nuuno la sheegay inuu geela laynayo taas oo uu sheegay in la waayey oo aanay jirin is agoo ta 2adna ku sheegay inay tahay dawey neynta xoolaha buka.
Axmed Haybe Warsame agaasimaha waa xda caafimaadka Xoolaha ee WXX oo kulan kan oo ka dhacay xarunta G/Sool ayaa waxa uu sheegay in safarkooda uu ka soo bilaabm ay Caynabo, ayna soo mareen dhamaan de gaanada ay cabashooyinku uga yimaadeen, waxana uu xusay in weli ay jiraan dhul u dhi man ha u badnaado Hawdka.
"Xoolaha aan la kulanay dhawr arimood ayaa sabab u ah dhimashadooda, kan dhal ada ku jiraa waa Sangaale waxana uu baabii ya dhulka neefmareenka taas oo sababta in neefku waasho, tan 2aad dhir badan oo bar waaqadu soo saartay oo xoolaha dhib ku ha ya marka ay cunaan iyo dadka oo xoolaha ku shubaya waxyaabo badan sida Badhi, Xa baasuud, Shanfax iyo waxyaabo badan oo waxyeelo u geysanaya" ayuu Dr. Axmed.
Kulankan ayaa waxaa ugu danbayn ka hadlay gudoomiyaha G/Sool Cabdiqani Jii dhe ayaa waxaa uu tiimkan ka codsaday in si aad ah ugu kuurgalaan dhibaatooyinka xo olaha nool haysta ee ku soo noqnoqonaya.
Dhibaatada mudooyinkii la soo dhaafay soo wajahay geela ayaa dadku waxay siyaabo kala duwan u macneeyeen iyadoo ay koo xdan dhakhaatiirta ah sheegeen in haatan xoolihii ay soo mareen ee ay daweeyeen aan laga soo sheegin wax dhib ah oo dambe kuwii bukayna ay ladnaadeen, waxaanay ka codsadeen dadka xoolaleyda ah in marka ay dareemaan dhibaato ku timi xoolahooda ay la soo xidhiidhaan xafiisyada xannaada xool aha.
HOWLGALKA MIDOWGA AFRICA EE SOOMAA LIYA OO HOOS U DHIGAYA CALANKA M/ AFRIKA SI AY BAROOR DIIQ UGU SAMEEYA AN MADA XWEYNIHII BURUNDI EE GEERIYOODAY.
Hawlgalka Midowga Africa ee AMISOM ayaa waxa ay hoos u dhigayaan calanka Mi dowga Africa ee suran xaruntooda Muqdi sho, magaalooyinka kale iyo dhamaan fariisi maha ay ku leeyihiin Soomaaliya si ay xur mo uga sameeyaan madaxweynihii Burundi, Pierre Nkurunziza oo geeriyooday asbuucii hore. Madaxa AMISOM, Ambassador Mode ra oo ka tacsiyeeyey geerida Madaxweyna ha ayaa sheegay in Madaxweyne Pierre si madaalenimo ah uu ugala shaqeeyey midow ga Africa sidii nabbad iyo amaan looga dhigi lahaa Soomaaliya.
Modera ayaa faray xarumaha AMISOM in ay calanka Midowga Africa hoos u dhigaan il aa laga gaarayo habeenka Salaasada saqda dhexe, June 16, taasi oo ah xus, ay ku xush maynayaan kaalintii Madaxweyne Burundi uu ku lahaa hawsha aya ciidankaasi ka hay aan dalka Soomaaliya.
Ciidanka Burundi ayaa kamida ciidanka AMISOM ee mudada ka badan 10sano ha wlgalka nabbad ilaalinta u jooga dalka Soo maaliya, waxaana ay joogaan M/Muqdisho iyo 2da Shabelle.
GALMUDUG OO HUB KA DHIGIS KU SAMEYN AYSA MALEESHIYAADKA KU SUGAN GALGADUUD
Wasiirka Amniga Gudaha, wasiirka Dekedaha iyo kaluumaysiga, wasiirka Bay’ada iyo horumarinta reer Miyiga iyo saraakiil kale ayaa Shalayy booqasho ku tagay xerada Dhaankaroone ee dhacda duleedka Galbeed ee Galinsoor iyo xero kale oo ku taalla duleedka Cadaado.
Wafdiga wasiiradaa ayaa qorshaynaya wajiga labaad ee xareynta maleeshiyaadka iyo gaadiidka dagaal ee ay wataan kuwaasoo qeyb ka ah hawlgalka tababarka Ciidamada daraawiishta Galmudug.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dhawaan ay bilaabi doonaan hub ka dhigista Maleeshiyaadka hubeysan ee ku sugan degaanada maamulka Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Maleeshiyaadkii ku sugnaa gobolka Mudug hub ka dhigis lagu sameeyay, islamarkaana hadda ay bilaabeen in ay xareeyaan Maleeshiyaadka ku sugan gobolka Galgaduud.
MUCAARADKA YEMEN OO SHAACIYAY WADA HADALLO AY LA GALAAN XULUFADA SUCUUDIGA
Sarkaal sare oo ka tirsan fallaagada Ye men, ayaa wareysi uu siiyay BBCda waxa uu ku sheegay in ay diyaar u yihiin wadah adallo toos ah oo ay lagalaan xulufada Sucu udiga si loo afjaro dagaalka shanta sanno ka socda dalkaas.
"Waxaa diyaar u nahay wadahadallo aan la galno waddamada dagaalka ku jira, si loo afjaro dagaalka ka socda Yemen shanta sa nno” ayuu yiri Maxamed Cali AlXuuthi oo xu bin sare oo ka tirsan fallaagada Yemen ka dagaallamaysa. Waxa uu sheegay inay xiriir la sameeyeen qaar ka mid ah waddamada ay dagaallamayaan, laakin ma shaacin wa ddan ka mid ah kuwaas.
Illaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xukuumadda Riyaadh oo ku aadan warka ka soo baxay. Yemen dagaallo ayaa ka socday tan iyo sannadkii 2014kii, kaddib markii mucaaradka Yemen ay la wareegeen inta badan waddanka oo ay ku jirto caasi madda Sanca.
Dagaalka ayaa ka sii daray sannadkii 20 15kii markaas oo Sucuudiga iyo wadd amo kale ay duulan ku qaadeen dalkaas ku yaa lla gacanka Carbeed si loo soo celiyo dowl adda sharciga ee hadda fadhida Cadan.
MUWAADINIIN SOMALIYEED OO KU XANIBNAA KENYA OO DALKA DIB LOGU SOO CELIYAY
Waxaa M/Muqdisho Shalay soo gaaray muwadiniin soomaaliyeed oo mudo ku xanib naa Dalka Kenya. Muwaadiniintaan waxa sa meyn ku yeeshay xayiraadii xaga dulimady ada ee DFS soo rogtay kaas oo uje edadiisu ay salka ku haysay sidii looga hortagi lahaa cudurka dunidda ku faafaya ee Covid19.
"Waxaa Shalay garoonka aadan cadde soo gaaray muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa waddanaka Kenya. Waxaa si doo kale waddanka ku soo laaban doona mu waadiniin Soomaaliyeedd oo ku xayiran wad damo kale” ayuu yiri Wasiirka duulista Hawa da Soomaaliya Maxamed C/hi Salaad Omar
Diyaaradaan dadka ay siday dhamaanto od iyaggu codsaday in dalkooda ay dib ugu laabtaan, waxaana socdaalkooda fududays ay safaarada Soomaaliya ee Kenya. Dhama antood dadkaan ayaa laga soo baaray xanu unka Carona.
Kooxo Burcad K/Afrikan ah ayaa waxaa ay Gudaha dalkaas ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsada dalkaas, xilli uu ku jiray ho wshiisa caadiga ah ee Shaqo. Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed Alle ha u naxariistee oo lagu Magaca abi jiray Ca bdiraxmaan Maca lin Cali , isaga oo ku sug naa Goo btii sa Shaqada oo ku taalla M/Ca pe town.
Maxamed Mac alin oo kamid ah Jaaliyad da Soom aaliyeed ee ku nool dalkaasi ayaa xaqiijiyay dilkaas,wax aana uu sheegay in ko oxihii ka dambeeyay dilka ay goobta ka baxs adeen.
Dalka K/Afrika ayaa Bishaan Guda heeda waxaa lagu dilay qofkii 4aad oo Soom aali ah,waxaana 7adkii la soo dhaafay Guda ha dalkaasi lagu dilay Muwaadin Soomaali yeed oo lagu Magacaabi jiray Yaasiin Maxa med Xasan.
Dalka K/Afrika ayaa inta badan waxaa si bareer ah loogu dilaa dadka Ajaanibta ah haba ugu badnaadaan soomaalida oo Gan acsiyo kala duwan ku leh,waxaana jirin cid ka tirsan dowladaha Soomaaliya iyo Koonfur Afrika oo ka hadla.
Dad mudaharaadaya ayaa booliska ku shii day quraarado mar ay gorrodda isku dar een M/London, halkaas oo ay kumanaan qof is kugu soo baxaaneen iyagoo dhegaha ka fur aystay digniino loo gu diidayo mudah raa dkaas.
Kooxo dibad baxa ya ayaa isugu soo urur ay badhtamaha caasimadda iyagoo ku do odaya inay taalooy inka ka ilaalinayaan dadka isir takoorka ka soo horjeeda ee iyaguna bann aan baxyada dhigaya. Mudaharaadayaasha di idan isir takoorka ayaa iyaguna sidoo kale isu gu soo baxay meelo kala duwan oo dalkaas ah oo xataa bartamaha London ka mid tahay
Booliska ayaa teed kala dhex dhigay dha wr kooxood oo doonayey inay ka qayb ga laan b annaan baxyadaa, maadaama oo 7aadkii hore bilowgiisii ay dhaceen rabshado dhex maray kooxahaasi.
Qabanqaabiyeyaal ka tirsan dhaqdhaqa aqa Black Lives Matter ayaa dadka ku boori yey inaanay ka qab galin banaan baxyada dhici do ona bilowga 7adkan maadaama oo ay dhici karto in shaqaaqooyin ka dhex abuu rmaan iyaga iyo kooxaha midigta fog.
Mudaharaadadaa midkood oo markii hore la qorsheeyey inuu Sabtida ka dhaco Lond on ayaa maalin la sii qadimay.
Hase yeeshee dad kale oo dibad baxaya ayaa isugu soo ururay taalada dagaalka ee Ce notaph oo ku taal Whitehall, waxayna si doo kale guudka uga baxeen taalada Winston Chu rchill ee ku taal barxadda Baarlamanka.
Kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa ga rabka midig, ayaa sheegay in ay iyaguna isku gu iman doonaan London si ay u ilaaliyaan taa looyinka taariikhda Ingiriiska.
Dadka mudaharaadka ka qayb galaya wax aka mid ah hogaamiyaha ururka midigta fog ee Britain First, Paul Golding, oo bishii hore lagu helay dambi aragagixisonimo ah, waxaanu yi dhi waxaanu "u soo baxnay si aanu u ilaalino taalooyinkayaga".
Taallada Churchill ayaa teed lagu wareeji yey si looga ilaaliyo dhaawac soo gaadhi kara, maadaama oo ay hore dad mudaharaadayey ugu tilmaameen inuu ahaa qof cunsuri ah.
Koox mudaharaadayaal ah oo farobadan ayaa teedkii la hor dhigay xafiiska ra'isal wasaaraha ee Downing Street iyo qaar kaleba qaaday oo booliskana shiiday.